घरजग्गा बेचेर श्रीमती परपुरुषसँग हिँडिन्, श्रीमान‍्ले कतारमा आत्महत्या गरे ! « Bagmati Online
घरजग्गा बेचेर श्रीमती परपुरुषसँग हिँडिन्, श्रीमान‍्ले कतारमा आत्महत्या गरे !
काठमाडौं । चितवनको भरतपुरका हरि वाग्ले खाडी मुलुक कतारमा पसिना बगाउँदै थिए । मंसिर दोस्रो साता उनले त्यहाँ आ,’त्म ह,’त्या गरे । आ,’त्म ह,’त्याको पछाडि पत्नीको विवाहेत्तर सम्बन्ध र मानसिक ट’र्चरको भूमिका रहेको परिवारको दावी छ । एक वर्षअघि बिदामा आएका वाग्लेले श्रीमतीको दवावमा भरतपुर महानगरको घर–जग्गा उनकै नाममा नामसारी गरिदिए । अनि, कतार फर्किए । वाग्लेको परिवारका एक सदस्यका अनुसार लकडाउन शुरु भएपछि फोन र म्यासेज गरेर नेपालबाट श्रीमतीले उनलाई ट,र्चर दिन थालिन् । एकजना पुरुषसँगको फोटो फेसवुकमा पोष्ट गरिन् । परपुरुषसँगको फोटो देखेपछि हरिले सोधे, ‘घरजग्गा तिम्रो नाममा गरेको छु, म यहाँ पसिना बगाउँदै छु किन परपुरुषसँगको फोटो फेसवुकमा पोष्ट गरेको ?’
श्रीमानको नाताले सो कुरा उनले सोध्नु नाजायज त थिएन । तर, सोही निहुँमा श्रीमतीको गा,ली र मानसिक ट,र्चर सहन नसकेपछि हरिले कतारमा आ,’त्म ह,’त्या गरे । परिवारको सदस्य अहिले उनको श,व ‘कहिले नेपाल आउला’ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । भरतपुर महानगरको घरजग्गा र लामो सयमदेखि कतारबाट श्रीमानले पठाएको पैसा लिएर श्रीमती पराईसँग हिँडिन्। उनीहरुको एउटा छोरा छ । छोरालाई दिदीको घरमा राखिन् । सो कुरा थाहा पाएपछि हरिले संसारबाट बिदा हुने निर्णयमा पुगेको परिवारको दावी छ । परिवारसँग उनले फोन बारम्बार भन्थे, ‘श्रीमतीले मानसिक तनाव दिइरहेकी छिन् ।’
श्रीमतीले दुरु,त्साहन दिएकै कारण परिवारका सदस्यले आ,’त्मह,’त्या गरेको भन्दै वाग्लेका परिवारका सदस्य ‘आ,’त्म ह,’त्या दुरु,’त्साहन’को जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पुगेका छन् । तर, चितवन प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
‘भाउजुले दुरु,त्साहन दिएको र घर–जग्गा बेचविखन गरेर ठगी गरेको जाहेरी लिएर गएका थियौं’ मृतककी बहिनीले भनिन्, ‘अब, न दाइको ज्या,न छ न सम्पत्ति बाँकी रह्यो ।’ चितवन बस्ने मान्छेले कतारमा दुरु,’त्साहन गर्न नसक्ने हुनाले आफूले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी नान्तिराज गुरुङले बताए । एसपी गुरुङले भने, ‘चितवन बस्ने मान्छेले कसरी दुरु,त्साहन गर्छ, हामी उजुरी लिन असमर्थ छौं ।’ आ,’त्म ह,’त्या दुरु,’त्साहन हुनका लागि पीडक सँगै हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष भेटघाट र कु,ट,पि’ट नभएपनि मानसिक ट’र्चर दिएर आ,’त्म ह,’त्या गर्न बाध्य पारेमा दुरु,’त्साहनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कानुन सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् । रातोपाटी बाट